Yepamusoro gumi Cloud Computing Mienzaniso uye Mashandisiro - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
gore, Cloud computing, Cloud mhinduro, zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji
Cloud computing imusika uri kukura. Zvinoenderana nekudzidza kwa Forbes, Cloud computing inofungidzirwa kuti ichawedzera kubva pa $ 67B muna 2015 kusvika pa $ 162B muna 2020 ichiwana CAGR ye19%. Nemabhizimusi matsva achikurumidza kuenda kune gore, mhinduro idzi dzave kunyanya mubhizinesi pamwe nehupenyu hwega. Kubva pamaemail edu ezuva nezuva kuenda kunochengeterwa foni, zvese zvinochengetwa uye zvinotarisirwa ne gore kadambari. The kushandiswa kwegore komputa hazvina kungogumira kune ako maemail kana chengetedzo, asi izvi zvinogadziriswa mhinduro zvave nzira yesarudzo yekusimudzira, kuyedza uye kuendesa software zvakare. Iyo mienzaniso ye gore kadambari ari kwese kwese kubva kune mameseji maapplication kune odhiyo nemavhidhiyo ekushambadzira masevhisi. Pano tichaona yepamusoro gumi gore kadambari mienzaniso uye unzwisise izvo maficha egore akatungamira mukuzivikanwa kwayo mumusika.
Wepamusoro gumi Zvishandiso uye Mienzaniso yeCloud Computing:
Cloud computing inopa zviwanikwa zvisingaverengeki kuburikidza nemhando dzakasiyana dzekunyorera. Izvi zvinoreva kuti iwe unongofanirwa kubhadhara kune iyo komputa zviwanikwa zvaunoshandisa. Izvi zvinobatsira mukugadzirisa spikes mune zvinoda pasina chikonzero chekuisa mari zvachose mumakomputa Hardware.
Netflix, semuenzaniso, inokwirisa ichi kugona kwe gore kadambari kuti zvibatsire. Nekuda kweiyo-inoda yekufambisa sevhisi, inotarisana nehukuru hwakakura mukuremerwa server panguva dzepamusoro. Iko kutama kubva mukati meimba data nzvimbo kuenda kumakore kwakabvumira kambani kuwedzera zvakanyanya mutengi wayo pasina kuisa mari mukuseta uye kugadzirisa kwezvivakwa zvinodhura.
Read More: Kusarudza Akakodzera Cloud Solution Provider - AWS vs Azure vs GCP
Iko kuwedzerwa simba remakomputa uye kugona kwegore kunotigonesa kuchengeta ruzivo nezve zvinoshandiswa nevashandisi. Izvi zvinogona kushandiswa kupa zvakagadziriswa mhinduro, mameseji uye zvigadzirwa zvinoenderana nehunhu uye nezvinodiwa nevashandisi.
Siri, Alexa uye Google Mubatsiri - ese ane makore-based echinyakare-mutauro akangwara bots. Izvi chatbots shandisa iyo computing kugona kwegore kuti ipe yakasarudzika mamiriro-anoenderana nevatengi zviitiko. Nguva inotevera paunoti, "Hei Siri!" rangarira kuti kune gore-based AI mhinduro kuseri kwayo.
Ziva Zvimwe: Chii chinonzi Artificially Intelligent Chatbot uye zvinogadzirwa sei?
Iro gore rinotendera vashandisi kunakirwa nenetiweki-yakavakirwa mukana wekutaurirana maturusi senge na uye makarenda. Mazhinji ekutumira mameseji uye kufonera maapplication senge Skype uye WhatsApp zvakare yakavakirwa pane cloud infrastructure. Ese mameseji ako neruzivo zvakachengetwa pahardware yemupi webasa kwete pamudziyo wako wega. Izvi zvinokutendera kuti uwane ruzivo rwako kubva chero kupi kuburikidza ne Indaneti.
Read More: 5 Zvikonzero: Nei Kutanga Kunofanira Kufunga Gore?
Zvishandiso zvemuhofisi senge Microsoft Office 365 uye Google Docs shandisa gore kadambari, zvichikubvumidza kuti ushandise zvishandiso zvako zvinogadzira zvakanyanya pamusoro pe Indaneti. Unogona kushanda pamagwaro ako, mharidzo uye maspredishiti - kubva kupi zvako, chero nguva. Nedata rako rakachengetwa mugore, haufanire kunetseka nezvekurasikirwa nedata kana mudziyo wako ukabiwa, kurasika kana kukuvara. Cloud inobatsirawo mukugovana magwaro uye inoita kuti vanhu vakasiyana vashande pagwaro rimwe chete panguva imwe chete.
Read More: Matanho gumi Ekubudirira Kwemakore Ekutama
5. Maitiro Ebhizinesi:
Mazhinji mabhizinesi manejimendi maficha senge yevatengi hukama manejimendi (CRM) uye Enterprise kuronga zviwanikwa (ERP) zvakare yakavakirwa pane anopa gore mupi. Software seSevhisi (SAAS) yave nzira inozivikanwa yekuendesa Enterprise level software.
Salesforce, Hubspot, Marketo nezvimwewo mienzaniso inozivikanwa yemhando iyi. Iyi nzira inodhura uye inoshanda kune vese mupi webasa nevatengi. Iyo inovimbisa kunetseka kwemahara manejimendi, kuchengetedza uye chengetedzo yesangano rako rakakosha bhizinesi zviwanikwa uye inokutendera iwe kuti uwane aya maapplication zviri nyore kuburikidza newebhu browser.
Read More: Maitiro Ekushandisa Cloud kune Backup uye kupora?
6.Kuchengetedza uye kupora:
Paunosarudza gore rekuchengetedza dhata basa reruzivo rwako zvakare rorara neako mupi webasa. Izvi zvinokusevha kubva kune capital capital yekuvaka zvivakwa uye kugadzirisa. Wako webasa mupi ane basa rekuchengetedza data uye kusangana nemutemo uye kutevedzera zvinodiwa. Gore rinopa zvakare kuchinjika mupfungwa kuti iwe unogona kunakidzwa nechengetedzo hombe uye pane-inoda backups. Kudzoreredza kunoitwazve nekukurumidza mukati megore nekuti iyo data inochengetwa pamusoro petiweki yemaseva epanyama kwete pane imwe pane-saiti data centre. Dropbox, Google Drawa uye Amazon S3 ndiyo mienzaniso yakakurumbira yemhinduro dzekuchengetedza gore.
7. Kuvandudza kwekushandisa:
Ungave uri kugadzira chishandiso chewebhu or famba kana kunyange mitambo, gore Mapuratifomu ratidza kuva mhinduro yakavimbika. Uchishandisa gore, unogona kugadzira zviri nyore scalable cross-platform zviitiko zvevashandisi vako. Izvi Mapuratifomu inosanganisira akawanda pre-coded maturusi nemaraibhurari - senge dhairekitori masevhisi, kutsvaga nekuchengetedza. Izvi zvinogona kukurumidza uye kurerutsa maitiro ekuvandudza. Amazon Lumberyard yakakurumbira nhare mbozha yekuvandudza chishandiso inoshandiswa mugore.
Read More: Chii chinonzi Rapid Application Development?
8. Kwayedza nekusimudzira:
Gore rinogona kupa nharaunda yekucheka mari uye kuvhura maapplication ako pamusika nekukurumidza. Pane kumisa nharaunda dzemuviri Developers inogona kushandisa gore kumisikidza uye kubvisa bvunzo nekusimudzira nharaunda. Izvi zvinochengetedza timu yehunyanzvi kubva mukuchengetedza mabhajeti uye kushandisa yakakosha nguva yeprojekiti uye zviwanikwa. Aya ma dev-test nharaunda anogona zvakare kukwidziridzwa kumusoro kana pasi zvichienderana nezvinodiwa. Vadivelu Comedy LoadStorm uye BlazeMeter zvishandiso zvekuyedza zvakakurumbira.
Kupa Kwedu Mukuyedzwa seSevhisi
Cloud computing inogonesa masayendisiti edata kuti apinde mune chero data resangano kuti aiongorore kuti iite mapatani uye nzwisiso, tsvaga kuwirirana kuita fungidziro, kufanotaura nezvedambudziko remangwana uye rubatsiro mukuita sarudzo inotsigirwa nedata. Cloud masevhisi anoita kuti migodhi yakawandisa yedata igoneke nekupa yakakwirira yekugadzirisa simba uye maturusi akaomarara. Kune dzakawanda vhura sosi hombe dhata maturu ayo akavakirwa pamusoro pegore semuenzaniso Hadoop, Cassandra, HPCC nezvimwe. Pasina gore, hazvizonetse zvakanyanya kutora uye kuongorora data munguva chaiyo, kunyanya kumakambani madiki.
Read More: Inoitwa Sei Nguva Yechokwadi Big Data Kugadziriswa?
Social Media ndiyo inonyanya kufarirwa uye inowanzofuratirwa application ye gore kadambari. Facebook, LinkedIn, Nzvimbo yangu, Twitter, uye mamwe akawanda masocial network anoshandisa gore kadambari. Nzvimbo dzepasocial network dzakagadzirirwa kuwana vanhu vaunotoziva kana vaungade kuziva. Mukufamba kwekutsvaga vanhu, tinopedzisira tave kugovana ruzivo rwemunhu. Ehe, kana iwe uchigovana ruzivo pa evanhu vezvenhau ipapo hausi kungozvigovana chete neshamwari asiwo nevaiti veplatform. Izvi zvinoreva kuti chikuva chinoda mhinduro ine simba yekutonga nekuchengetedza data mune chaiyo-nguva - kushandisa gore rakaomarara.
Cloud yakapa mhinduro dzakaomarara kumakambani pamwe nevanhu. Kana iwe uchitsvaga mupi webasa kuti akubatsire iwe kuwedzera gore ipapo NewGenApps anogona kuva mudiwa wekusarudza. Takashanda pane akawanda ane mukurumbira gore Mapuratifomu se AWS, Azure uye GCP. Taura nesu nhasi kubvunza kana chirongwa.